Eyona Wallet yeCryptocurrency ngoMeyi 2022 | Funda ngokupheleleyo isiKhokelo soRhwebo esi-2!
Eyona Wallet yeDijithali eyiDwarha- Zintathu iiWallet ze-Crypto eziGqwesileyo ngo-2022
Ngaba ujonge ukuntywila kwihlabathi le-asethi yedijithali? Ukuba kunjalo, kunyanzelekile ukuba ucinge ngendlela yokugcina iithokheni zakho ngokukhuselekileyo. Njengoko ishishini le-cryptocurrency ligcwele imingcipheko yokuqhekeza! Nangona oku kuvakala ngathi sisigqibo esoyikekayo, uncedo lusemnyango. Namhlanje sithetha nge-wallet ye-cryptocurrency engcono kwimarike, indlela yokufumana enye ehambelana neenjongo zakho, kunye namanyathelo afunekayo ukuseta ngaphantsi kwemizuzu emihlanu.
Eyona Waltlet yemali ilungileyo ye-2022: Ezintathu eziphezulu
Siye safumana ezona zikhulu zibalaseleyo ze-crypto kwimarike ngoku. Uza kubabona badweliswe apha ngezantsi.
Binance: Eyona Wallet yeCryptocurrency iyonke.
OKEx: Eyona Wallet yeCrypto yeZixhobo kunye neempawu.
Coinbase: Eyona Wallet yeCrypto yaBasanda kuzalwa.
Okulandelayo, sinika iinkcukacha ezithe vetshe kukhetho ngalunye lokugcina ukukunceda uthathe isigqibo. Qaphela ukuba kamva, sikwachaza eyona wallet ye-cryptocurrency ezizezinye.
Eyona Waltlet yemali ilungileyo ye-2022: Uphengululo oluBanzi
Kananjalo nokuthathela ingqalelo loluphi uhlobo lokugcina olunokuba lolona ulungileyo-kuya kufuneka ujonge ukufikeleleka, ukhuseleko, igama lomboneleli emva kwesipaji, nokunye okuninzi.
Ukuba konke oku kutsha kuwe, ungakhathazeki. Sithetha ngeentlobo ezahlukeneyo zeewallet ze-crypto kunye neemetwork eziphambili zokufumana ezilungileyo emva kohlolo olulandelayo.
1. I-Binance-Eyona ndawo ilunge kakhulu ye-Cryptocurrency Wallet 2022
I-Binance isebenza kwizigidi zabathengi kwihlabathi liphela. Sicinga ukuba le yeyona wallet ilungileyo ye-cryptocurrency ye-2022 ngezizathu ezahlukeneyo-esithetha ngayo kulo lonke olu hlaziyo. Ukhetho lokugcina kulo mboneleli lubizwa ngokuba yiTrust Wallet- onokuyikhuphela njengeapp yasimahla. Iqonga lixhasa ngaphezulu kwe-40 blockchains. Oku kunokusetyenziswa njengotshintshiselwano kangangoko kunokuba sisisombululo sokugcina i-crypto.
I-Trust Wallet, exhaswa yi-Binance, ixhasa ii-asethi ezaziwayo zedijithali ezinje ngeBitcoin, i-Ethereum, iLitecoin, iCardano, kunye neBinance Coin. Uya kufumana kwakhona iithokheni ezincinci ezithengiswayo kubandakanya iAave, iCosmos, iBurgerSwap, iMonetha, iNavcoin, kunye nabanye abaninzi. Inkqubo yeselfowuni ikuvumela ukuba uthenge iiasethi ze-crypto ezixhaswayo usebenzisa ikhredithi okanye ikhadi lebhanki - emva kokugqiba inkqubo ye-KYC (iqonga kufuneka liqinisekise isazisi sakho). Ukuba sele ubambe ezinye iimali zedijithali, unokukhetha phakathi kweethokheni ezili-150 zokurhweba ngaphakathi kwesicelo. Isitshixo sangasese sabucala siqhutywa ngokusebenzisa ialgorithm ukwenza ibinzana lokubuyisela (ibinzana lamagama ali-12) ukubuyisela umva nokukhusela isipaji sakho.
Endaweni yoko unokukhetha ukhetho lwesipaji sewebhu seBinance. Kule meko, i-Binance iya kukhusela uninzi lweethokheni zakho ze-crypto kwindawo yokugcina ebandayo, oko kuthetha ukuba ayixhumekanga kwi-intanethi. Iqonga ngokwalo likwabonelela ngedilesi yokurhoxisa. Ukuba ucwangcisa ukuthenga nokugcina iimali zedijithali, unokujonga iakhawunti yokonga yeBinance ukuze ufumane imali kwiiasethi ezingasebenziyo kwipotifoliyo yakho. Uya kuhlawula umrhumo wekhomishini we-0.10% kwisilayidi ngasinye xa uthengisa i-crypto kwiqonga eliphambili leBinance. Ukubeka oku ngokwembono, le yi- $ 0.10 kuyo yonke iodolo ye-100 yeedola.
Ngaphezulu kwe-100 lezigidi zabasebenzisi
Amakhulu ee-cryptocurrencies axhaswayo kunye neekhomishini ezivela kwi-0.1% kwisilayidi ngasinye
Isipaji seTrust senzelwe i-newbies kunye nabarhwebi abanamava
Ezinye iithokheni ze-crypto ezixhaswayo azifumaneki ukuthenga ngetyala okanye kwikhadi ledebhithi
Iiasethi zeCrypto ziqikelelwa kakhulu kwaye ziyaguquguquka. Soloko ujonga umngcipheko welahleko ngaphambi kokuba uqhubeke
2. OKEx -Eyona Wallet ilungileyo yeCrypto yezixhobo kunye neempawu
I-OKEx ngomnye umboneleli wesipaji kunye nezigidi zabathengi kwiincwadi zayo. Inketho yokuqala sisoftware yasimahla ekhutshelweyo kwaye ikwenza ukuba ukwazi ukuthatha inxaxheba kutyalo-mali lwakho ngokujonga izitshixo zakho zabucala. Esi sikhokelo sifumene ngaphezulu kwe-400 ye-crypto ngababini yokurhweba ngale ndlela yokugcina isisombululo, oko kuthetha ukuba kukwalutshintshiselwano oluphathekayo. Ii-asethi ezinkulu zibandakanya iBitcoin, iCardano, iPolkadot, kunye nokunye.
Le yenye yezona zikhwama zibalaseleyo ze-crypto ngenxa yoluhlu olubanzi lweeasethi ezahlukeneyo zedijithali. Sifumene iithokheni ezisandula ukudityaniswa ukubandakanya iBabyDoge, iSmooth Love Potion, i-ECOMI, ezezimali zeClover, iMidlalo yeQela leMidlalo, kunye nabanye. Unokwenza idiphozithi ngokusebenzisa iapp usebenzisa amakhadi etyala kunye netyala - emva kokugqiba inkqubo ye-KYC. Intlawulo yekhomishini yokuthenga nokuthengisa yi-0.10%.
Olunye ukhetho sisikhwama sewebhu se-OKEx. Oku kukugcina ungazikhathazi ngokhuseleko lwamaqhosha akho abucala. Ukhuseleko luza ngohlobo lwe-SHA-256 hash kunye ne-ECDSA encryption- kunye nokugcinwa kwezinto ezininzi, iibhanki kunye nemida yokugcina. Sele unazo ezinye iimali zedijithali? Ungazithengisa ezi kunye nezinye iithokheni ezixhasiweyo. Ngenye indlela, unokusebenzisa ukubanjwa kwakho okukhoyo ukuthenga enye imali yedijithali.
Ngaphezulu kwe-400 yeebhloko zemali ezixhaswayo ezixhaswayo
Ikhomishini yokuthengisa ii-cryptocurrencies eziqala nge-0.1%
Iimveliso ezivela kwimveliso zinokuqhubela phambili kakhulu kwii-newbies
3. I-Coinbase-Eyona ndawo ilungileyo ye-Crypto Wallet yeeNewbies
I-Coinbase lutshintshiselwano oludumileyo olunikezela ngeyona ngxowa-mali ibalaseleyo ye-crypto yee-newbies. Umboneleli ujonga ngaphezulu kweeakhawunti ezizigidi ezingama-56 kwihlabathi liphela kwaye unikezela ngesisombululo sokugcina esinezixhobo kunye namaziko orhwebo. Oku kukhululekile ukukhuphela abasebenzisi be-iPhone kunye ne-Android kwaye ixhasa zonke iithokheni ze-ERC-20 kwintengiso-kubandakanya i-DAI kunye ne-USDC. Unako ukugcina nokudlulisa ii-asethi ezingama-500 +, ezinjengeBitcoin, iStellar, iLitecoin, iDogecoin, kunye nokunye.
Uya kukwazi ukutshintshela okanye uthenge iimali zedijithali ezixhaswayo ngokuthe ngqo kwi-app yeselula emva kokudibanisa i-akhawunti yakho ye-Coinbase kwi-wallet. Lo mboneleli ukwakuvumela ukuba ukhethe ukhetho lwewebhu, apho i-98% yamathokheni akho agcinwa ekhuselekile ngaphandle kwe-intanethi. Abaqalayo ngakumbi banokukhetha le ndlela njengoko iqonga lijonga izitshixo zakho zabucala. Ngoko akukho mfuneko yokuba uthabathe uxanduva ngokwakho.
Le wallet ye-crypto ikwasebenzisa le i-2FA sele ikhankanyiwe kunye ne-opt-in whitelisting feature, eyenza kuphela ukurhoxa okuthembekileyo kwi-Coinbase okanye kwiidilesi zangaphandle. Imirhumo yekhomishini apha xa kuthengiswa ibiza kakhulu kwi-1.49% kwisilayidi ngasinye. Ukongeza, ukuba ukhetha ukuxhasa ngemali iakhawunti yakho ngekhadi lekhredithi okanye ledebhithi, oku kuza nentlawulo ye-3.99%. Lo mboneleli ubambelela ngokungqongqo kwiinkqubo zeKYC.
Uluhlu lwee-cryptocurrensets onokukhetha kuzo nokhuseleko lwebanga leziko
Utshintshiselwano oluphezulu lwe-crypto lusebenzisa izigidi zabathengi kwihlabathi liphela
Gcina ulawulo kwizitshixo zakho zabucala kunye nesipaji sosetyenziso lwefowuni
Amakhadi etyala eza nentlawulo yedipozithi eyi-3.99%
Yintoni i-Cryptocurrency Wallet? Amagqabantshintshi ngokukhawuleza
Amathuba okuba uphanda eyona wallet ye-crypto ilungileyo kuba ukhathazekile ngokhuseleko lotyalo-mali lwakho lweasethi yedijithali. Kodwa oku kubandakanya ntoni kanye?
Isipaji semali eyi-cryptocurrency sinokuthelekiswa neakhawunti yebhanki- kuphela sisetyenziselwa ukugcina eyakho yedijithali iimali.
Kuxhomekeka kwisipaji osikhethileyo, uya kufumana idilesi kawonke-wonke-ethelekiswa nekhowudi yohlobo kunye nenombolo yeakhawunti. Oku kwenza ukuba abantu bakuthumele amathokheni edijithali besebenzisa idilesi ethile.
Usenokunikwa isitshixo sabucala, kwakhona ngokuxhomekeke kuhlobo lwesipaji. Le yikhowudi eyimfihlo ekufuneka uyazi kuphela ekuvumela ukuba ufikelele kwii-asethi zakho ze-crypto.
Ezona wallets zibalaseleyo ze-imali yedatha ziya kuphindaphindeka njengotshintshiselwano, zikuvumela ukuba ugcine iimali zakho zedijithali ngokhuseleko - kunye nokuthenga, ukuthengisa kunye nokuziguqula ngokulula.
Isikhokelo sokukhetha eyona Wallet ilungileyo ye-Crypto yeeMfuno zakho
Jonga apha ngezantsi isikhokelo sendlela yokukhetha eyona wallet ye crypto ilungileyo. Oku kubandakanya iindlela ezahlukeneyo ezikhoyo, kunye neempawu zokhuseleko kunye nezinye izinto ezinokukunceda ukhethe eyona ilungileyo.
Loluphi uhlobo lweCrypto Wallet oyifunayo?
Ukuqala, kuya kufuneka ucinge malunga nokuba yeyiphi uhlobo Isipaji se-crypto sinokukulungela. Zine iindlela eziphambili onokukhetha kuzo kwaye nganye inikezela ngokufikeleleka, uxanduva lomntu kunye nenqanaba lokhuseleko.
Isixhobo se-hardware sifana ne-USD flash drives esiyisebenzisayo ukugcina amaxwebhu edijithali kunye neefayile zemidiya. Kuphela isetyenziselwa ukugcina isitshixo sakho sabucala. Njengoko besitshilo, udinga le khowudi yokudlula eyimfihlo ukufikelela kutyalomali lwakho lwe-cryptocurrency.
Isipaji sehardware siza ngohlobo lwesixhobo esibonakalayo kwaye, nangona sikhuseleke kakhulu kunezinye iindlela zokugcina, kunokuba yinto eyoyikisayo kubasandul.
Kukhuseleko oluphezulu, uninzi lweewallet zekhompyuter zifuna uhlaziyo rhoqo.
Kuya kufuneka ukuba wenze ugcino lwedatha rhoqo kwimeko yelahleko okanye urhwaphilizo.
Kuyimfuneko ukukhusela ibinzana lakho lokufumana kwakhona ngaphandle kwengozi.
Abanye abatyali mali bongeza oku kwisixhobo esahlukileyo, babhale kwisinyithi esomeleleyo ukuyikhusela kwimozulu, okanye bahlule ibe ziinqindi kwaye bayigcine kwiindawo ezininzi.
Ngokukodwa, isipaji sehardware esichazwe apha ngasentla sidinga ukufakwa kwisixhobo esifana nelaptop. Ngaphaya koko, ababoneleli banokuhlawulisa naphi na ukusuka kwi- $ 20 ukuya kwi- $ 1,500 kolu hlobo lwemveliso, kuxhomekeke kuhlobo kunye neempawu.
Isisombululo esona sisisiseko sokugcina i-crypto ukuze kube lula kunye noxolo lwengqondo kukusayina kunye nomrhwebi olawulwayo ukuze urhwebe iiasethi zedijithali ngeCFDs. Njengoko iithokheni ezingasekhoyo-awunakuze ukhathazeke ngokhuseleko lwemali yakho.
Ukongeza, unokukhupha imali ngokukhawuleza nanini na ufuna kwaye amandla ahlala enikezelwa. Sithetha ngale ndlela i-wallet ye-crypto isisombululo kamva kwaye uphonononge elona qonga lilungileyo lomsebenzi.
Ngokungafaniyo nale ndlela ichazwe ngasentla, iiwallet zewebhu azikhuselekanga- ngakumbi kusetyenziswa iqonga elingalawulwa. Kungenxa yokuba uhlala ungafikeleli kumaqhosha akho abucala. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa ukuba utshintshiselwano nge-crypto lutshatyalalisiwe, oluyingozi yokwenyani, lushiya iimali zakho kunye neeasethi zedijithali ezisengozini enkulu kubusela.
Imiselweyo iqonga lokurhweba iya kuhlala inika eyona wallet ilungileyo yedijithali kolu didi.
Kungenxa yokuba ukuthenga, ukuthengisa kunye nokuguqula iiasethi zakho zedijithali, kuya kufuneka nje ungene kwiakhawunti yakho yomrhwebi ukufikelela kwipotifoliyo yakho.
Ngale ndlela, unokujonga ukusebenza kweethokheni zakho- kunye nokukwazi ukuvala indawo yakho ngesaziso somzuzwana.
Ababoneleli beekhwama zewebhu abalawulwayo banikezela ngesisombululo esikhuselekileyo sokugcina kolu shishino lunobungozi, ikakhulu ngenxa yemithetho ekufuneka bayilandele ukugcina ilayisensi evela kubalawuli bezemali.
Ukongeza kwezi zibonelelo zikhankanywe apha ngasentla, iarhente ezilawulwayo ziyakugcina ekudluliseni amathokheni phakathi konaniselwano olwahlukileyo olusemthethweni. Ngapha koko, bahlala benza iidisithi ezikhawulezayo kwaye zilula kwaye bagcina iifizi ziphantsi.
Ezona wallets zibalaseleyo ze-crypto zibonelela ngesisombululo sokuthengisa esiphela entendeni yesandla sakho. Isicelo seselfowuni yenye yezona ndlela zifikeleleke kakhulu zokugcina iiasethi zakho zedijithali, kwaye olu hlobo luhlala lusimahla kubasebenzisi be-Android kunye ne-iPhone.
Kubalulekile ukuba ujonge ukuba zeziphi izinto zokhuseleko eziza kufakwa kwisipaji sakho - ngaphambi kokufaka usetyenziso kunye nokudlulisa naziphi na iimpawu.
Elinye lawona manqanaba asisiseko okhuseleko onokulindela ukuba ngumgaqo-esithetha ngawo kungekudala.
Unokujonga kwakhona isigunyaziso sedilesi- ukuqinisekisa ukuba unokuthunyelwa kuphela kwimithombo ethembekileyo.
Ukukhusela ngcono iiasethi zakho, kububulumko ukusebenzisa usetyenziso lwefowuni lwababoneleli abalawulwayo.
Isipaji sedesktop kubandakanya ukukhuphela isoftware kwiLaptop yakho okanye kwikhompyuter yasekhaya. Oku kunokubonisa ingxaki ukuba ufuna ukufikelela kwiiasethi zakho zedijithali- kodwa akukho ndawo ikufuphi nesixhobo obambe kuso amathokheni akho.
Ezona wallets zibalaseleyo ze-crypto zikuvumela ukuba ufikelele kutyalo-mali lwakho lwedijithali ngesaziso somzuzwana, kwaye naphi na apho ukhoyo. Uya kuzuza ngakumbi ngokuba nenketho engaphezulu kwesinye xa kufikwa kumba wokujonga inkqubela phambili yepotifoliyo yakho.
Jonga uphononongo lwethu lwe-AvaTrade kamva ngolunye uhlobo kwezi ntlobo zogcino zikhankanywe apha ngasentla. Umrhwebi osemva kwesipaji unikezela zombini usetyenziso kunye nokufikelela kwi-crypto CFDs ngeqonga layo eliphambili.
Ngaba umboneleli weWalfdocurrency Wallet ulawulwa?
Uninzi lweewallet zedijithali (kunye nababoneleli bazo) azilawulwa. Oku kuthetha ukuba akukho mfuneko yokuba balandele nayiphi na imigangatho xa benikezela ngenkonzo kubarhwebi nakubatyalomali.
Ababoneleli abagciniweyo abanelayisensi babambelela kwimithetho nakwimithetho eyilelwe ukugcina iimali zakho zikhuselekile kulwaphulo-mthetho olukwi-intanethi, njengobuqhetseba.
Ukukhetha iqonga elilawulwayo kuhlala kukusindisa ekuthatheni uxanduva lokugcina amaqhosha akho abucala kunye notyalo mali lwedijithali lukhuselekile- kwiimeko ezininzi, umrhwebi uya kukwenzela oku.
Abanye babalawuli abakhulu ababonelela ngeelayisensi kwesi sithuba babandakanya ASIC, i FCA, yaye CySEC.
Iza kukhuselwa njani iAccurrency yakho Wallet?
Njengoko besesitshilo, ummiselo ubonelela ngoxolo lwengqondo lokuba uthengisa ngeqonga elithembekileyo kwaye iiasethi zakho zedijithali zikhuselekile. Ukongeza koku, xa uthatha isigqibo sokuba yeyiphi eyona wallet ye-crypto ilungileyo kwiinjongo zakho-jonga ukuba zeziphi izinto zokhuseleko ezikhoyo.
Iimpawu zokhuselo eziphambili ekufuneka ujonge kuzo zibandakanya:
2FA / Ukuqinisekiswa kweFactor ezimbini: Njengoko besitshilo kuvavanyo lwethu lwangaphambili-i-2FA yinkqubo esisiseko yokhuseleko esetyenziswa zezona ndawo zilungileyo ze-crypto. Ngamanye amaxesha kukho iindlela ezininzi zoku. Enye yezona zinto zixhaphake kakhulu kukwenziwa kwekhowudi yethutyana neyodwa eya kuthi iphele kwimizuzwana engama-30. Oku kwaziwa njengePassword yeXesha elinye (TOTP). Oku kuya kusetyenziswa ecaleni kwelinye igama eligqithisiweyo kwaye kongeza umaleko owongezelelweyo wokhuseleko.
Isixhobo kunye ne-IP Whitelisting: Njengoko sichukumisile, oku kubandakanya ukongeza iidilesi kuluhlu lwakho lweendawo eziqinisekisiweyo zokurhoxa. Eli linyathelo lothintelo lokunqanda nabani na ukuba afumane iziqinisekiso zakho kunye nokuthumela imali kumthombo ongathembekanga.
Ukhuseleko lufihliwe. Kukho ezinye izinto ekufuneka uziqwalasele ngaphambi kokuthatha isigqibo sokuba yeyiphi isisombululo sokugcina se-crypto esifanelekileyo kuwe - esiza kuchaza ngokulandelayo.
Ngaba kukho uLuhlu olwahlukileyo lweeMakethe zeCrypto?
Xa ukhangela eyona wallet ye-cryptocurrency, usenokuba sele unentengiso ethile engqondweni. Nokuba kunjalo, ukufikelela kuluhlu olwahlukileyo lweeasethi onokukhetha kuzo kunokuba luncedo kuphela.
Kananjalo, ezona mali zilungileyo ze-cryptocurrency ziya kubonelela ngesisombululo sokugcina esixhasa iimfumba zamathokheni ahlukeneyo. Kungenxa yokuba unokujonga kwi thenga iLitecoin ngoku, kodwa kamva ufuna ukwaba ezinye iimali thenga iShiba Inu Coin or Tron.
Ngaba uyakwazi ukuguqula, ukuthenga kunye nokuthengisa?
Njengoko uqaphela ukuba, akukho zimbini iindlela zokugcina ezifanayo. Abanye abatyali mali bayonwabile ngokukhuphela isipaji kwaye bayisebenzise ngokufanelekileyo ivenkile utyalo-mali lwabo. Nangona kunjalo, uninzi lwethu lukhetha isisombululo sokurhweba esiphela. Oku kuhlala kubandakanya ukukwazi ukuthenga, ukuthengisa kunye nokuguqula.
Njengoko ubona, kukho uluhlu olubanzi lwezinto onokucinga ngazo xa ukhangela eyona wallet ye-crypto ukugcina iithokheni zakho zikhuselekile. Ukuba ujonga into efuna umzamo omncinci wokukhusela kwaye ikuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise ekuhambeni - funda uqhubeke.
Eyona ndlela ilunge kakhulu kwiWallet cryptocurrency Wallet
Apha ngezantsi, uya kubona uphononongo olubanzi lweyona ndlela ilungileyo kwi-crypto wallet.
Qaphela ukuba umboneleli akakuvumeli ukuba uthenge ii-cryptocurrensets ngokuthe ngqo, kodwa yenye ye Amaqonga ezorhwebo aphezulu eCFD kwisithuba.
1.I-AvaTrade-Yonke imijikelo yeWallet yeWebhu eNdala enye
Ulawulo lwe-Tier-1 kunye ne-tier-2 ezininzi zilawula i-AvaTrade, kuquka i-ASIC (Australia) kunye ne-MiFID (i-EU). Ukongeza, oku kuyenza iqonga elithembeke kakhulu. Umboneleli we-CFD unikezela ngeyona ndlela ilungileyo kwi-wallet ye-cryptocurrency njengoko awuzukuthatha mthwalo wokuthenga izinto zedijithali. ngqo. Endaweni yoko, ii-CFD zilandelela ixabiso leethokheni ezingaphantsi- oko kuthetha ukuba awudingi kugcina okanye ukhusele nantoni na.
Abantu abaninzi bakufumanisa oku kuluncedo njengoko kususa nesidingo sokujonga izitshixo zabucala kwaye bathathe amanyathelo okhuseleko. I-Cryptocurrency CFDs ikwavumela ukuba uqikelele kunyuko or ukuwa kweethokheni zakho ozikhethileyo Umzekelo, ukuba ucinga ukuba iPolkadot izakubona ukwehla kwexabiso- ungabeka iodolo yokuthengisa ukuze uzuze kwimarike ewayo. Oku kwaziwa njengokuhamba kancinci, kuye nakubani na ongazi.
Ukuba uyasithanda isandi sesipaji seapps kwaye ufuna ukuthengisa usiya, unokukhuphela i-AvaTradeGO. Esi sicelo sasimahla sikwenza ukuba ubeke esweni iakhawunti yakho, ngaphandle kokuthenga nokuthengisa iimali zedijithali njengeeCFD. Ukuma okuqinileyo komlawuli kunika enye indlela ekhuselekileyo yokugcina kunye nokuguqula amathokheni. Uluhlu lwee-asethi ze-crypto zibandakanya iBitcoin, MIOTA, Ripple, Stellar, NEO, Dogecoin, kunye nezinye ezininzi.
Ungathenga uluhlu olubanzi lwemali yedijithali ngeeCFD ngaphandle kokuhlawula iikhomishini, kwaye ukusasazeka kuqinile kuzo zonke iimarike. Ukongeza imali kwiakhawunti yakho, unokukhetha phakathi kwamakhadi etyala kunye namatyala, ukuhanjiswa kwebhanki, kunye ne-e-wallets, kubandakanya iNeteller, iWebMoney kunye neNeteller. Ewe kunjalo, xa unqwenela ukukhupha imali otyalomali, yimeko yokungena kwiakhawunti yakho ukwenza iodolo.
I-CFD ye-Trade Trade ngaphandle kokukhathazeka ngokugcina kunye nokugcina amathokheni
Umboneleli wesipaji ulawulwa yimigangatho ye-tier-1 kunye ne-tier-2
Ikhomishini yokurhweba yasimahla ye-crypto ngokusasazeka kukhuphiswano
Ulawulo kunye nokungasebenzi kwentlawulo emva konyaka kungekho ntengiso
I-71% yabatyali zimali abathengisayo baphulukana nemali xa bethengisa iiCFD kunye nalo mboneleli
Eyona Wallets ye-Crypto 2022: Qalisa ngamanyathelo amathathu
Ukuba sele ugqibe kwelona wallet ilungileyo ye-imali yedatha yakho-uyakufumana apha ngezantsi indlela yokuqalisa.
Inyathelo 1: Bhalisa nge-Crypto Wallet Provider
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukusayina kunye nomboneleli obuzwayo. Kungenxa yokuba izipaji ezilandelayo ze-crypto zinikezelwa ngabarhwebi abathembekileyo okanye iintengiselwano-ezinje ngezi ziqwalaselwe namhlanje. Uya kudinga ukufaka igama lakho elipheleleyo, i-imeyile kunye negama lokugqitha elikhethiweyo.
Okulandelayo, kunokwenzeka kakhulu ukuba kuya kufuneka uxelele umboneleli wewallet idilesi yokuhlala, umhla wokuzalwa, kunye nolunye ulwazi malunga namava akho kunye nokuma kwezezimali.
Njengoko besesitshilo, amaqonga abekekileyo aya kulandela imigaqo ye-AML.
Oku kuthetha ukuba abarhwebi abalawulwayo kufuneka baqinisekise isazisi sakho nedilesi ukukhusela ulwaphulo-mthetho kwezemali.
Ke ngoko, ungayigqiba inkqubo ye-KYC ngokuthumela ikopi ecacileyo yencwadana yakho yokundwendwela ukuze ufumane ubungqina besazisi sakho, kunye nebhilikhwe yamva nje okanye isitatimenti sebhanki ukubonisa ubungqina bedilesi yakho.
Inyathelo 2: Qalisa nge-Crypto Wallet oyikhethile
Ukuba ukhetha i-app ephathwayo, kuya kufuneka uyikhuphele kwivenkile efanelekileyo. Olu luDlalo lukaGoogle lwe-Android kunye neVenkile yeApp yabasebenzisi be-iPhone.
Nje ukuba ukhuphele kwaye ufake usetyenziso lwesipaji esiphathwayo, ungangena ngeenkcukacha ozenzileyo kwinqanaba 1.
Ukuba ukhetha indlela ye-wallet yewebhu - ngena eqongeni endaweni yoko uqalise inkqubo yokongeza i-cryptocurrencies kwipotfoliyo yakho.
Inyathelo 3: Yongeza ii-Cryptocurrensets kwiWalethi yakho
Ukuba awusayi kuthenga naziphi na iimali zedijithali, unokwenza idiphozithi usebenzisa uhlobo lwentlawulo olukhethileyo kwaye uthenge amathokheni ngesipaji - ukuba oyikhethileyo uyakuvumela oko.
Ukuba sele ungumnikazi wee-cryptocurrensets zakho-sebenzisa idilesi kawonkewonke oyinikwe ngumnikezeli wesipaji ukuthumela iiasethi kwisisombululo sakho esitsha sokugcina.
Unokukhetha nokuthenga iiasethi zecrypto ngokusebenzisa iiCFD, kwimeko apho unokusebenzisa umrhwebi olawulwayo onje nge-AvaTrade.
Apha, unokongeza iimali kwiakhawunti yakho usebenzisa amakhadi etyala/amatyala, ukudluliselwa kwebhanki, okanye i-wallets. Emva koko, thenga ii-asethi ze-crypto nge-CFDs ukunqanda ingxaki yokugcina ngokupheleleyo.
Ukuba uyazi ukuba zeziphi iimpawu zedijithali ofuna ukufikelela kuzo, sebenzisa ibar yokukhangela kwaye ukhethe. Uya kudinga ukufaka imali onqwenela ukuyithenga (okanye uthengise kwimeko yokunciphisa ii-CFD) kwaye uqinisekise yonke into.
Eyona Waltlet yemali ilungileyo ye-2022: Isiphelo esipheleleyo
Kuso sonke esi sikhokelo, sithethile ngeendlela ezahlukeneyo ze-crypto ezifumanekayo kunye nendlela ezahluke ngayo ngokufikeleleka, ukhuseleko kunye neempawu. Izipaji zehardware zifaneleke kakhulu kubatyali mali abanamava abaziqondayo ii-ins kunye nokuphuma kokukhusela iiasethi zedijithali.
Iifowuni zeselfowuni nazo ziluncedo, kodwa ngamanye amaxesha kubandakanya ukuthatha unonophelo kumaqhosha akho abucala, anokuba yingozi. Ukuba ulahlekelwa lolu lwazi, ngekhe ukwazi ukufikelela kwiithokheni zakho. I-wallet yewebhu ayisoloko iyindlela ekhuselekileyo ngenxa yokuba zisengozini kangakanani imali yakho. Eyona ndlela ilungileyo yezona zininzi ngumrhwebi olawulwayo.
Siphinde sajonga i-AvaTrade, eyona ndlela ibalaseleyo ye-crypto wallet kwindawo. I-ASIC kunye nezinye iziphathamandla zezezimali ze-6 zilawula le broker - ukudala indawo yokuthengisa ekhuselekileyo yeCFD. Kwakhona, ukuthenga iimali zedijithali ngeCFD kususa umthwalo kunye noxinzelelo lokugcina amathokheni. Kwaye, awuyi kuhlawula nayiphi na imirhumo yekhomishini kwaye unokufumana inzuzo kwiimarike eziwayo.
Yeyiphi eyona wallet ilungileyo ye-cryptocurrency?
Eyona wallet ilungileyo ye-cryptocurrency yiBinance. Inketho yokuqala yiTrust Wallet, exhaswa ngotshintshiselwano. Apha unokukhetha phakathi kweethokheni zedijithali ezingaphezu kwe-150 njengoko usetyenziso luxhasa ngaphezulu kwe-40 blockchains ezahlukeneyo. Ngesoftware yasimahla yeselfowuni, uya kujonga ezakho izitshixo zabucala. Unokukhetha isisombululo sesipaji sewebhu apho izitshixo zakho zigcinwa kwaye uninzi lwee-asethi zakho ze-crypto zigcinwa zikhuselekile kwindawo yokugcina ebandayo.
Eyona ndlela ilungileyo yokuthenga isipaji yedijithali yimali elawulwayo yeTripTrade. Apha, ungathenga iimali zedijithali ngee-CFDs, ezisusa ixhala lokufumana kunye nokugcina iimali zedijithali. Ngapha koko, unokuzama ukwenza inzuzo kwiimarike eziwayo ngokuhamba kancinci ngomyalelo wokuthengisa. Lo mboneleli unikezela nge-0% ikhomishini yokurhweba kwaye zombini iqonga kunye neapp kulula ukuhamba kwaye zixhasa iindlela zokwenza intlawulo, kubandakanya amakhadi etyala kunye namakhadi okuthenga, ii-e-wallets, kunye nokudluliselwa kwebhanki. Uncedo olukhulu yimeko yokurhweba ekhuselekileyo ngenxa yokuma kwayo okuqinile.
Yintoni iwallet yedijithali?
Ngokuqhelekileyo, sigcina imali ebonakalayo kwii-akhawunti zebhanki, apho thina sisebenzisa iinombolo ze-ATM zobuqu ukumisa ukungena okungagunyaziswanga. Iimali zedijithali, ngakolunye uhlangothi, zigcinwe kwi-crypto wallets apho, kuxhomekeke kuhlobo. Uya kunikwa isitshixo sikawonke-wonke (idilesi abantu abanokuthumela kuyo amathokheni) kunye nesitshixo sabucala ukuze ukwazi ukufikelela kwizinto zakho. Olona khetho lufanelekileyo kukubhalisa kunye nomthengisi olawulwayo onje ngeAvaTrade. Ukuze ukwazi ukurhweba ngexabiso elisisiseko le-cryptocurrencies ngaphandle kokufuna ukugcina i-asethi yakho, ibinzana lokubuyisela, kunye nezitshixo eziyimfihlo zikhuselekile kubaduni.
Yeyiphi eyona wallet ikhuselekileyo ye-crypto oyisebenzisayo?
Ukuba unamava kwaye uyayiqonda indlela yokukhusela iimali zedijithali, ke i-wallet ye-hardware iya kuba yindlela yakho efanelekileyo. Abantu abatsha mhlawumbi babambelele ngokugqibeleleyo kwi-brokerage efana ne-AvaTrade ebonelela ngendawo yokuthengisa ekhuselekileyo ebonelelwa kuphela ngamaqonga alawulwayo. Ngaphezu koko, awudingi kuzikhathaza ngokugcina apha njengoko uthengisa nje ngokusekelwe kwixabiso le-asethi esisiseko.
Ngaba ndingathenga, ndithengise kwaye ndiguqule iiasethi ngesipaji se-crypto?
Nokuba i-crypto wallet ikwenza ukuba uthenge, uthengise kwaye uguqule- kunye nevenkile- iya kuxhomekeka kuhlobo olukhethileyo kunye nomboneleli ongemva kwayo. Kananjalo, ukuba esi sisombululo sokurhangqa yonke into siyinto oyikhangelayo, unokujonga kwi-AvaTradeGO app apho unokufikelela khona kwi-CFD ye-crypto ethembekileyo.